Inkqubo yekhalenda yokukhusela ekukhulelweni yaphuhliswa kuma-1920 nguJogenologist waseOjapani kunye no-Austrian Knaus. Le ndlela isekelwe ekubaleni umhla oqikelelweyo wokuvuthwa kunye nokuziyeka ekulalaneni ngokwesondo kwiintsuku ezinqabileyo zokuzala. Indlela yekhalenda enye yeyona nto ingathembekiyo. Ukusuka ku-9 ukuya ku-40% yabasetyhini basebenzisa le ndlela bayakhulelwa. Ngoko ke, indlela yokukhusela ikhalenda ephakamileyo yaphuhliswa - indlela yokwenza uphawu. Ukongezelela ekubaleni umhla wokugqithisa, kuthatha ingqalelo imeko yomzimba yowesifazane.
Indlela yekhalenda yeOgino-Knows
Le ndlela yindlela eyona yendalo yokukhusela. Isekelwe kuphela ekuqwalaselweni nasekubaleni. Ngenxa yokungabikho kokuphazamiseka kwiinkqubo zemvelo zomzimba, indlela yekhalenda yindlela kuphela yokukhuselwa yiCawa yamaRoma Katolika.
Ingundoqo yendlela yile ndlela ilandelayo. Emva kokulala ngokwesondo, i-spermatozoa iphila nje ngeeyure ezimbalwa nje. Kwaye ukuya emlonyeni wesibeleko basebenzayo ukusuka kwiintsuku ezimbini ukuya kwiveki. I-Ovum e-ovulation (ephuma kwi-ovary) inokuzaliswa kuphela kwiiyure ezingama-24. Ukwazi ukuqala kwe-ovulation, unokuceba ukubandakanya ngesondo ukwenzela ukuba nangokwemvelo ungavumeli ukukhulelwa okungafunekiyo. Ukusebenzisa ngempumelelo indlela yekhalenda ye-Ogino-Knaus, kuyimfuneko ukuzalisa ikhalenda yokujikeleza kokuhamba kwinyanga yonke. Nangona kunjalo, le ndlela ilungele kuphela kubafazi abanomjikelezo oqhelekileyo wokuya esikhathini. Ukungaphumeleli kancinci kwinkqubo ye-hormonal, ukugula, ukuphazamiseka kwemihlaba kunokutshintsha umjikelezo wesini kwaye kukhokelela kwiiphene kwizibalo. Kwaye, ngenxa yoko-ukukhulelwa.
Ngendlela ye-Ogino-Knaus, unako ukubala "iintsuku" ezinobungozi (ezifanelekileyo ukukhulelwa):
Isiqalo sexesha "eliyingozi" (elicebileyo) libalwa ngolu hlobo: ubude bomjikelezo omfutshane kunemihla engama-18;
Ukuphela kwexesha elivundiweyo kubalwa ngolu hlobo: ubude bomjikelezo omde kunemihla eyi-11.
Ngokomzekelo, ukujonga imizuzu eyi-12 yokugqibela, ubale ukuba umjikelezo omfutshane unemihla engama-26, kwaye ixesha elide lingama-32 iintsuku. Kuvela ukuba ukususela kwiintsuku eziyi-8 (26-18) ukuya kwiintsuku ezingama-21 (32-11) zomjikelo (kwaye usuku lokuqala lomjikelezo lubhekwa njengosuku lokuqala lwenyanga) yizona zilungele ukukhulelwa. Ukuba injongo ikhuselekile ekukhulelweni, ke le mihla kuyimfuneko ukuba uyeke kwizenzo zesondo, okanye ukhuselwe ngezinye iindlela. Kwaye, ngokulandelelana, ukususela kwiintsuku ezi-1 ukuya kwezi-8, kunye neentsuku ezingama-21 ukuya ekupheleni komjikelo, le ndlela ayikwazi ukukhuselwa.
Ukukhusela le ndlela ayilona nto ingcono. Kodwa ngokucwangciswa kokukhulelwa le ndlela iphumelela kakhulu.
Indlela yekhalenda yokubonakalisa
Kuyaziwa ukuba ngomjikelezo weentsuku ezingama-28, i-ovulation iyenzeka ngosuku lweshumi elinesihlanu lomjikelezo wesini. Kodwa le xabiso lilinganiselwa. Kubafazi abaninzi, umjikelezo uhlukile, kwaye ukuvuthwa kwenzeka kancinci ngaphambili okanye kamva kamva. Ukuqwalasela ukungaphumeleli kokukhusela ekukhulelweni ku-Ogino-Knaus, iingcali zincenga ukuba zongeze umhla ovulation kwikhalenda kunye nezinye iiparameter ezintathu. Okokuqala kukulawula kokushisa komzimba (indlela yokushisa). Okwesibini kukulawulwa kwimoya yomlomo wesibeleko efihliweyo kwisisu (indlela yomlomo wesibeletho). Icandelo lesithathu lilawula ukutshintshwa kwisimo somlomo wesibeleko, ukuthoba kunye nokuvuleka. Iziphumo zazo zonke iimbonakalo zibhalwa kwikhalenda ekhethekileyo, ngokubhekiselele kwiintsuku ezikhuselekileyo zesini.
Ukusebenza kwendlela yekhalenda yezilumkiso kuphezulu kakhulu. Yesibili kuphela ukugqiba inzalo. Ngokusetyenziswa okufanelekileyo, ngabafazi abathathu kuphela kwabangama-1000 banokukhulelwa okungenakulungiswa (0.3%!). Oku kufaniswa neendlela ze-hormone kwaye ziphezulu kunezinye iindlela zokukhulelwa. Nangona kunjalo, le ndlela ayikhuseli kwiintsholongwane zomzimba. Ukusetyenziswa ngokuphumelelayo kwendlela yokwenza impawu, kubalulekile ukujonga imeko yakho imihla ngemihla. Kuba ukujonga kuthatha malunga nemizuzu eyi-10 ngosuku. Indlela yokuqala ekuqaleni ibonakala inzima kwaye ngaphambi kokuba isicelo sayo sinconywa ukuba siqeqeshe ngokufanelekileyo.
Intliziyo ephilileyo ngexesha lokukhulelwa
Unyango lwee-herpes zomzimba ngokukhulelwa
Ukuba ukuzalwa komntwana akunakwenzeka, kubakho isizathu kunye nesisombululo
Ukupaka ngeinanayi, utamatisi noshizi brie
Izixhobo ezintathu zaseKorea eziya kunceda ukuxazulula iingxaki zesikhumba
Indlela yokukhetha ipaka efanelekileyo yokutya
Ukuhlonela abanye - uyazihlonela
Ukuhlobisa indlu kunye nemifanekiso emihle
UJulia Kovalchuk - "Abavelisi abazange bakholwe, kodwa ndathabatha ndahamba ..."
Ukunyamekelwa kweenyawo: izithende ezithe tye
Isaladi "Igolide Legolide"